Ngathi-iBeijing IWHR Corporation (BIC)
Ubungakanani beshishini ikakhulu buhlanganisa:
I-BICisebenza ikakhulu kuphando kwiinkalo ezinxulumene nezobuchwephesha ezinje ngezixhobo zamanzi aphesheya nakwilizwe jikelele kunye namandla ombane, unxibelelwano, amandla, umzila kaloliwe, ubunjineli boomasipala, ulwakhiwo njlnjl. Uphando lobunjineli kunye noyilo, ulwakhiwo, ukongamela, ukubonisana nokuvavanya, ukubeka esweni nokuhlola, i-EPC; uphando kunye nophuhliso, ukuveliswa nokuthengiswa kwezinto ezintsha zobunjineli, izixhobo zokubeka iliso kunye nenkqubo esekwe kulwazi, izixhobo zonyango lwamanzi, kunye nezixhobo zombane; ezisebenza ngokwazo kunye nokuba yiarhente yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle ishishini kuzo zonke iintlobo zorhwebo kunye netekhnoloji.
Ukubonelela ngoyilo lwabacebisi, iseti epheleleyo, ikhontrakthi yeprojekthi yokufaka izixhobo kunye nenkonzo yasemva kwentengiso yeeprojekthi zobunjineli zokugcina amanzi amancinci naphakathi; Uyilo, ukuveliswa kunye nokufakwa kwamadama erabha, amadama e-hydraulic elevator;
I-BIC ngumboneleli ophambili wezixhobo zokucoca amanzi kunye nolwakhiwo e-China kwaye ineqela lobuchule labayili, iinjineli kunye nabasebenzi bolawulo. Sikwabonelela ngothethathethwano lobuchwephesha kunye nomsebenzi kwiiprojekthi ze-Engineering, Procurement and Construction (EPC) kwezi ndawo zilandelayo: unyango lwamanzi amdaka kamasipala (ETP), unyango lwamanzi amdaka avela kwimizi-mveliso (amanzi amdaka asuka ezikhumba, ukushicilela nokudaya amanzi amdaka, amaphepha okusila amanzi amdaka, kunye namanzi amdaka ezityalo) , iiprojekthi zonikezelo lwamanzi kunye nonyango lweentlobo zamanzi ezikhethekileyo (iarsenic water, fluorinated water, forum- manganese water and brackish water) .Emva kweminyaka eliqela yophando, i-BIC iphuhlise uthotho lwemveliso ezinxulumene nonyango lwamanzi kubandakanya: i-Ultra Filtration (UF ), Ukubuyela umva kwi-Osmosis (RO), iMembrane Bioreactor (MBR), ukuCocwa kwaManzi oLwandle, ukuSuswa kweoyile kunye neZityalo eziCociweyo zoNyango lwaManzi, kunye nePompo yokuPhuma kweZithuthi eziNgxamisekileyo. Ezi mveliso ziguqula kwaye ziyafumaneka ngexabiso elifanelekileyo.
Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle
Bamba ukungeniswa kunye nokuthunyelwa kweentlobo ezahlukeneyo zorhwebo ngokuhambelana nemigaqo-nkqubo yelizwe ngokuzimeleyo okanye njengearhente;